3 IBM Training Course Onye ọ bụla na ahia kwesịrị iji - ITS
IBM WebSphere na-ekwu banyere otu ihe omume PC na-emepụta ihe na klas nke mmemme azụmahịa buru ibu dị ka "ngwa na mix mixware". Ngwaahịa ndị a na-eji ndị njedebe mee ihe na itinye ngwa na ngwa dị iche iche. Na nke a, anyị ga-atụle ụfọdụ n'ime ihe ọmụmụ IBM kacha mkpa. Gịnị mere ha ji dị mkpa na Carreer gị? Kedu ihe mgbaru ọsọ nke ọmụmụ ndị ahụ na ma ị ruru eru ma ọ bụ maka ọmụmụ ihe ndị ahụ.
3 Usoro mmụta ọzụzụ nke IBM kachasị mkpa bụ ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru:
Ntinye na nchịkwa nke IBM WebSphere Portal 8 na Windows
Ntinye na nchịkwa nke IBM WebSphere Portal 8 na Linux
IBM Sametime 9.0 nchịkwa
IBM Training Courses & Asambodo:
1. Ntinye na nchịkwa nke IBM WebSphere Portal 8 na Windows
2. Ntinye na nchịkwa nke IBM WebSphere Portal 8 na Linux
3. IBM Sametime 9.0 nchịkwa
A na-ezube usoro ọzụzụ a nke IBM maka ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ ndị dị mkpa iji nweta ma ọ bụ weghachite ọrụ ha na WebSphere Portal. Site aka-na ojiji nke na-ewebata, emebe na-elekọta WebSphere Portal, kpuchie chairmen ga-amụta isi site ọnụ mbepụ echiche nke WebSphere Portal nzukọ ochichi Na isi ọkara nke N'ezie, ị megharia isi kwa ụbọchị nzukọ rụzuru na IBM WebSphere Portal Server 8.0, gụnyere ulo oru portlet, nchedo, na WebSphere Portal web administration. Na nke abụọ 50% nke usoro ahụ, mmegharị uche na ntinye na nhazi nke WebSphere Portal V8.0.Configuration na-agụnye nchekwa data site WebSphere Portal, otu onye na-edebanye aha ndị ahịa, na nchịkọta maka ntụgharị na mmegharị ka ọ ghara ịdaba. Ihe ọmụmụ a na-ekwu banyere IBM WebSphere Portal 8.0 dị ọhụrụ:
New nhazi usoro, IBM nwụnye Manager
Nyocha akụkọ nyocha
Page nke a na-ahụ anya (Ihe e kere eke dị mfe site na ngwá ọrụ na saịtị)
Okwu ka mma nke na-eji usoro ozo ezo
Inquiry mma upgrade (peeji nke metadata sụgharịrị dị ka catchphrases na HTML)
OpenID bolster (Na-enyere saịtị ọbịa iji nyochaa site tinye n'ọrụ a outsider àgwà soplaya)
Nhazi ọkachamara ọhụrụ
Nke a n'ime ma dị n'etiti ụzọ ụzọ dị mma maka ndị nlekọta ọhụụ nwere ọhụụ ndị ọhụrụ na IBM® WebSphere® Portal na WebSphere Portal kpuchie ndị nlekọta (tupu WS Portal 6.1) ndị dị mkpa iji nweta nkwalite ha WebSphere Portal nzukọ ikike. Na nke a, ndị nduzi ntụzi ọhụrụ na WebSphere Portal Administration ga-ewere ihe dị mkpa na nlekọta nzukọ nke IBM WebSphere Portal, na Portal echiche. Ọzọkwa, WebSphere Portal kpuchie nduzi na-mkpa ịtụte ha WebSphere Portal nzukọ aptitudes ga ngwa ngwa bulie itinye aka na-ewebata, emebe, na-elekọta WebSphere Portal na-adị kwa ụbọchị arụmọrụ.
I kwesịrị inwe:
Ịghọta WebSphere Ngwa Server na ọnọdụ JVM
Jikọta na WebSphere Ngwa Server na ọnọdụ JVM
Ịkwesịrị ịnwe ike iji ahụ, ikike, na usoro nke IBM WebSphere Portal 8.0 na:
Tinye akwụkwọ ntanetị gaa na peeji nke na-eji ihe ọhụrụ dị ọhụrụ nke onye nrụpụta peeji
Debe portlet ọzọ
Debe blog na izu
Debe aha na ntinye
Mee na itinye perceivability iwu
Ọrụ na ụkọ na-akwado
Chegharịa ma ọ bụ tinye akara ntinye
Debe otu okwu omenala
Gbanwee ihe ejikere na-eji ozi sitere na Derby nchekwa data gaa na DB2 Universal Database
Hazie WebSphere Portal iji jiri IBM Tivoli Server LDAP Server Server Server
Mee ka cell na-etinye aka na netwọk nwere otu ụyọkọ ụlọnga otu
Họrọ akwụkwọ kachasị mma maka mkpa gị
Gbanye osisi na ịgbaso
Jiri XML Access nweta usoro nchịkọta usoro
Bugharia ma weghachite ozi
Iwepụ nnyefe nchịkwa
A na-ezube usoro ọzụzụ a IBM maka ndị isi ụlọ ọrụ dị mkpa iji nweta ma ọ bụ redesign ha WebSphere Portal nzukọ ikike. Site aka-na ojiji nke na-ewebata, emebe na-elekọta WebSphere Portal, kpuchie isi ga-amụta dị oké mkpa site ọnụ mbepụ echiche nke WebSphere Portal nzukọ ochichi Na isi òkè nke N'ezie, ị hone nkịtị kwa ụbọchị nzukọ rụzuru na IBM WebSphere Portal Server 8.0, gụnyere ụlọ ọrụ portlet, nchedo, na WebSphere Portal nchịkwa weebụ. Na nke abụọ 50% nke usoro ahụ, mmeghari uche na-eme ka nhazi na nhazi nke WebSphere Portal V8.0. Nhazi ya na-etinye nchekwa data site na WebSphere Portal, jikọtara inweta registries, na bunching maka ọdịdị na mmegharị ka ọ ghara ịdaba.
Nke a n'ime na-agafeghị oke larịị N'ezie bụ na-enye aka n'ihi na ma ahụmahụ kpuchie oru ndị ọhụrụ ka IBM® WebSphere® Portal na WebSphere Portal kpuchie isi (bu ụzọ WS Portal 6.1) na-mkpa iji nweta nkwalite ha WebSphere Portal nzukọ aptitudes. Na nke a N'ezie, kpuchie chairmen ọhụrụ ka WebSphere Portal Administration ga-na oké mkpa na propelled nkwalite ozi ochichi nke IBM WebSphere Portal, na Portal echiche. Ọzọkwa, WebSphere Portal kpuchie nlekọta na-mkpa ịtụte ha WebSphere Portal nzukọ ikike ga ngwa ngwa bulie itinye aka na-ewebata, ndokwa, na-elekọta WebSphere Portal na-adị kwa ụbọchị arụmọrụ.
I kwesiri inwe:
Ịkwesịrị ịnwe ike iji ahụ, ikike, na usoro nke IBM WebSphere Portal 8.0 gaa:
Tinye akwụkwọ ntanetị gaa na peeji nke na-eji ihe omimi nke onye na-emepụta ihe
Ịrụ ọrụ na nkwarụ na-edozi
Tweak ma ọ bụ na-agbanye ụzọ
Nke a na-eduzi Ọzụzụ IBM na-eduzi gị site na nchịkọta na inyefe IBM Sametime 9.0. Ọ na-ekpuchikwa nsogbu nsogbu.
Usoro a na-eduzi gị site na ịchọta na ịchịkwa IBM Sametime 9.0. Ọ na-agbakwụnyekwa ihe dị mkpa n'ịchọpụta.
Enweghị ihe ọhụụ gbasara Sametime, mana ị ga-enwe ike ịghọta usoro nlekọta usoro dị mkpa na itinye usoro.
Gosipụta ngalaba nke Sametime 9.0 (nke na-abụghị Edge, ngalaba vidiyo dị mma ma ọ bụ nkwenye ndị ahịa dị iche iche)
Kwado ka e guzobe usoro dị iche iche nke Sametime 9.0
Malite, kwụsị, wee malitegharịa dum Sametime 9.0 gburugburu ebe obibi
Jiri Sametime 9.0 mepụta ihe ndị dị ịrịba ama
Iju Ojuju Iji Chọta Ndi IIT Na-eto Eto ndi nwere IIM na Minds: Sundar Pichai